Elegant Lapel တစ်ခုတည်း Breasted Solid အမျိုးသမီးဝတ်ရှပ်အင်္ကျီကို - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မရှိ | WoopShop®
Elegant Lapel တစ်ခုတည်း Breasted Solid အမျိုးသမီးဝတ်ရှပ်အင်္ကျီ
$28.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $47.99
အရောင် ဝါသော စိမ်းလန်းသော Khaki ပန်းရောင် လာဗင်ဒါ အဖြူ
အဝါရောင် / တစ်ခုအရွယ်အစား / တရုတ် အစိမ်း / တစ်ခုအရွယ်အစား / တရုတ် Khaki / တစ်ခုအရွယ်အစား / တရုတ် ပန်းရောင်၊ အရွယ်အစား၊ တရုတ် Lavender / One Size / တရုတ် အဖြူ / တစ်ခုအရွယ်အစား / တရုတ်
Elegant Lapel တစ်ခုတည်း Breasted Solid အမျိုးသမီးဝတ်ရှပ်အင်္ကျီ - အဝါရောင်၊ အရွယ်အစား၊ တရုတ် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ချည်မျှင်အင်္ကျီ! သိပ်သည်းထည်မှတဆင့်ထွန်းလင်းမထားဘူး။ ပေါင်၏အလယ်အထိအရှည်။
အရောင်အလွန်သာယာသောဖြစ်ပါသည်, အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်။ တိုင်ကြားချက်မရှိ, ရှည်လျားသွားလေ၏ကြောင့်ခြေရာခံခဲ့သည်။ 44R အားကြီးသောအရွယ်အစားကြီးသည့်အချိန်တွင်ဤသည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှကျွန်ုပ်သိသည်။ ၅ *
ရှပ်အင်္ကျီများသည်အလွန်လှပပြီးအရည်အသွေးကောင်းလွန်းသည်။ ) ၄၆ အရွယ်သာပြည့်စုံပါသည်။
ငါထည်အနည်းငယ်ဆန့်သည်, ခန္ဓာကိုယ်မှသာယာသော, အလတ်စားသိပ်သည်းဆနီးပါးမှတဆင့်ထွန်းလင်းပါဘူးငါ beige, ယူခဲ့ပါတယ်။ Ross မှာ။ 44-46 လွတ်လွတ်လပ်လပ်, အင်္ကျီလက်များသာမန်ဖြစ်နိုင်သည်, 165. မှာအနည်းငယ်ကြာရှည်လိမ့်မည်စက်ရုံစက်ရုံ, တောင်းဆိုမှုများမရှိဘဲ, ပန်းထိုးခလုတ်များနှင့် OK ကို))
ကျွန်တော့်မှာဒီမဂ္ဂဇင်းကအင်္ကျီ ၃ လုံးရှိတယ် အဝါရောင် - အေးမြ! - နောက်ဆုံးရာသီ။ ယခုတွင်ငါသည်အဖြူနှင့်အဖြူရောင်အက္ခရာနှစ်လုံးကိုမှာယူခဲ့သည်။3မှာအရွယ်အစားချဉ်းကပ် - ကြီးသောနှင့်သေးငယ်မ - ချဉ်းကပ်။ အနုတ်လက္ခဏာ - အနုဆေး - အ ၀ တ်လျှော်သော်လည်း၊ ချွေးမဖြစ်သော်လည်းအင်္ကျီထဲတွင်ခန္ဓာကိုယ်လုံးလုံးရှူရှိုက်ခြင်းမရှိပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်ဤအင်္ကျီတွင်သာတိုး။ အဆက်မပြတ်ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ khaki ကို khaki လို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတာလဲဆိုတာငါနားမလည်ဘူး။ ဒါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ - 2% khaki ဟာဘရောင်းနဲ့စိမ်းတယ်။ ပြီးတော့ဒီဟာအပြာရင့်ရောင်အင်္ကျီပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်မဆိုးပါဘူး။ နွေ ဦး ရာသီနှင့်ချမ်းသောနွေရာသီ (သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အင်္ကျီ - အအေးကိုဝတ်ဆင်နိုင်သည်) လမ်းမကြီးပေါ်တွင်စောင့်ဆိုင်းနေပြီး၎င်းသည်သင်၏စကတ်မှဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါလျင်မြန်စွာဖြောင့်သည်။